Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Belgium na -enweta ụgbọelu mbụ ya nke Airbus A330neo
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belgium • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Air Belgium na -enweta ụgbọelu mbụ A330neo mbụ ya
Ezinụlọ A330neo bụ ọgbọ ọhụrụ A330; ọ na -ewulite na akụnụba pụtara ìhè, ịdị n'otu na ntụkwasị obi nke ezinụlọ A330, ebe na -ebelata oriri mmanụ na ikuku CO2 n'ihe dị ka pasent 25.
Air Belgium ga-ebuga ụgbọ elu ahụ n'okporo ụzọ na-ejikọ Brussels na ebe ogologo njem.
A na-ahazi ụgbọ elu ahụ na oche 286 na okirikiri klaasị atọ-klaasị azụmahịa ụgha 30 dị larịị, klaasị 21 dị elu, na oche klaasị 235.
A kwadebere oche niile nwere usoro ntụrụndụ ụgbọ elu kachasị ọhụrụ, Wi-Fi nọ n'ụgbọ elu na ọkụ mmụọ.
Air Belgium, onye na-ebu ozi mba ofesi zuru oke nke hiwere isi na Mont-Saint-Guibert na Belgium, eburula nke mbụ n'ime abụọ A330-900.
A na-ahazi ụgbọ elu ahụ na oche 286 na okirikiri klaasị atọ (klaasị azụmahịa ụgha 30 dị larịị, klaasị 21 dị elu, na oche klaasị 235). Enyere ụgbọelu ahụ ihe Airbus Ụlọ ọdụ ụgbọ elu. A kwadebere oche niile nwere usoro ntụrụndụ ụgbọ elu kachasị ọhụrụ, Wi-Fi nọ n'ụgbọ elu na ọkụ mmụọ.
Ekele maka teknụzụ ọhụrụ A330neo, Air Belgium ga-erite uru site na ngwọta ụgbọ elu dị ọnụ ala na gburugburu ebe obibi, ebe ị na-enye ndị njem ụkpụrụ nkasi obi kacha mma n'ime ụlọ dị jụụ na klaasị ya. Na mgbakwunye, obere mkpọtụ na anwuru ọkụ ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu ọgbọ gara aga na-eme ka A330neo bụrụ onye agbata obi ọdụ ụgbọ elu enyi.
Onye na-ebu ụgbọ ala Belgium na-arụ ọrụ ugbu aAirbus nnukwu ụgbọ mmiri nke nwere A330-200F na A340-300; A340ne ga -eji nwayọ dochie A330neos.
Ezinụlọ A330neo bụ ọgbọ ọhụrụ A330; ọ na -ewulite na akụnụba egosipụtara, ịdị n'otu na ntụkwasị obi nke ezinụlọ A330, ebe na -ebelata oriri mmanụ na CO 2 ikuku anwuru ọkụ ihe dị ka pasentị iri abụọ na ise n'otu oche ma e jiri ya tụnyere ọgbọ gara aga, ụgbọ elu ndị na-asọmpi, ma na-enye ike na-enweghị atụ. A25neo na-arụ ọrụ site na igwe Rolls-Royce Trent 330 nke ọgbọ ọhụrụ wee gosipụta nku ọhụrụ nke nwere mmụba na-abawanye na nku nku maka mma, ikuku na-eti ikuku.
Site n'akwụkwọ ịtụ ihe karịrị ụgbọ elu 1,800 sitere n'aka ndị ahịa 126 na njedebe nke Septemba 2021, A330 ka bụ ụgbọ elu ezinụlọ kacha ewu ewu n'oge niile.